भक्तपुरमा ‘चिकेन विङ्स’ खाएर बिरामी, मासु पसल अनुगमन भक्तपुरमा ‘चिकेन विङ्स’ खाएर स्थानीय बिरामी परेपछि मासु पसलहरू अनुगमन गरिएको छ। प्राप्त गुनासोका आधारमा भक्तपुरको च्याम्हासिंहका तीन मासु पसलको बुधबार अनुगमन गरिएको हो। रेणु त्वानाबासु
‘मैले साथ छाडेँ...’ कारण एकदमै सरल र साधारण छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्नासाथ हिमाले भन्नेछिन् ‘माइ भजाइना भोटर आउट...’ विश्वमै यो पहिलोपटक प्रयोग भएको भाषा होइन। न त, कसैले बोल्ने छिल्लिएको शब्द हो। ‘यो दमितहरूको अभिव्यक्त्ति हो। संसारमै मैले पहिलोचोटि प्रयोग गरेको भाषा होइन,' हिमालाई लाग्छ, ‘सायद नेपालमा मैले प्रयोग गरेँ कि!’ गजेन्द्र बाेहरा
भक्तपुरमा १ सयजना क्षमताको फिटनेस क्लब सञ्चालनमा
भक्तपुरमा बिहीबारदेखि ‘क्लब मध्यपुर र बर्गर हाउस’ सञ्चालनमा आएको छ। खेलकुदको विकासमा फरक ढंगले अगाडि बढ्ने र फरक पहिचान बनाउने उदेश्यले ‘क्लब मध्यपुर’ ले नयाँ जमर्को गरेको हो। रेणु त्वानाबासु
असोजमा कोरोना संक्रमित ३ लाख ७६ हजार पुग्ने, 'पिक' मा साउन २५
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थले समेत हेर्न नपाएको ‘अतिगोप्य प्रक्षेपण प्रतिवेदन’ को आँकडा हाराहारीमै हालको संक्रमण दर रहेको भेट्न सकिन्छ। सरकारले याे अवधिका विभिन्न विन्द‌ुमा रहने 'एक्टिभ' केसकाे आँकडामात्र सार्वजनिक गर्दै आएकाे छ। दीपक दाहाल
कोभिड-१९ का कारण देश आक्रान्त भएका बखत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई डेढ करोडको गाडी चढ्न मन लागेको छ। आफू चढ्दै आएको गाडी पोखरामा थन्क्याएर मन्त्री अर्याल नयाँ गाडी खरिदमा लागेकी हुन्। उनको गाडीमोहलाई साकार पार्न मन्त्रालयले अर्थबाट डेढ करोड रुपैयाँ स्वीकृति पनि लिइसकेको छ। खिलानाथ ढकाल
एक दिनमा १४० मिलिमिटर पानी परेको ठाउँलाई वर्षाको ‘थ्रेसहोल्ड’ले पहिरो जाने सम्भावना देखाउँछ। मौसमविदले पहिरो जाने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाइसकेको हुन्छन्। तर, पहिरो जानुभन्दा अगाडि तयारी किन गरिँदैन? खिलानाथ ढकाल
कोरोना भाइरस गइहाले पनि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पुनः लयमा फर्किन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो अनुमानमा ५० प्रतिशतसम्म रेस्टुरेन्ट पूर्णरूपमा बन्द हुन्छन्। पर्यटकलक्षित रेस्टुरेन्ट पुनः सञ्चालनमा आउन कठिन छ। सुशील भट्टराई
शैलेश र उनका बुवाको स्वभाव यदाकदा मिल्छ। शैलेश घरमा सहयोगीको रूपमा प्रहरी राख्दैनन्। आफ्नो गाडीमा अरूलाई चढाउँदैनन्। जे पायो त्यही गर्दैनन्। विवादमुक्त रहने र आफूले गरेको कामबारे प्रचार नगर्ने उनको ‘बानी’ छ। यिनै कारणले उनलाई प्रहरीमा ‘इमानदार’ चिनायो, इन्स्पेक्टरदेखि एआइजीसम्म एक नम्बर बनायो। खिलानाथ ढकाल
मेरो घर लुट्ने, मेरो जग्गा लुट्ने अनि मेरै भाषा मास्ने सरकार!
'यहाँको रैथाने हो म, मेरो घर लुट्ने ? मेरो जग्गा लुट्ने ? मेरै भाषा मास्ने ?, 'सरकारलाई खुला चुनौती दिँदै उनले भनिन्,' सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि नमान्ने कस्तो सरकार हो । सर्वोच्चमाथि नै प्रतिगमन गर्ने सरकारलाई अब त्यसै छाड्नु हुन्न । यदि सरकारले आफूलाई नसच्याए हरेक घरबाट एक-एक आतंककारी निस्किनेछन् र त्यसको नेतृत्व म गर्नेछु, हिम्मत छ भने गोली ठोक ! ।' सृजना घिमिरे
‘संसारका कुनै पनि सीमा नाकामा स्थायी बिओपी छैन, नेपालमा चाहिँ किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने तर्क गरियो,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ सालमा गरिएको ओएन्डएम कार्यान्वयनमा आएपछि सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति न्यून बन्दै गएको छ।’ खिलानाथ ढकाल
सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। यसले मुलुकलाई चीरकालसम्म संकटको भासमा पार्ने विकराल खतराबाट जोगाएको छ। नैतिक रुपले उनलाई एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार छैन। उनको सनक र नियतलाई निशर्तः साथ दिने एवम् गणतान्त्रिक शासन परम्पराको सर्वोच्च संस्थाको वदनामी गर्ने विद्यादेवी भण्डारीले पनि एकसाथ राजीनामा दिनु श्रेयष्कर हुनेछ। जो सुकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नसक्छ, तर त्यो पदको गरिमा कायम गर्न सकेन भने उसलाई पनि कानूनी परम्पराबाटै विदाइ गर्नु जरुरी हुन्छ। यसको स्पष्ट मतलब, राष्ट्रपति भण्डारी अब महाअभियोगको लायक छिन्। सुन्दर खनाल
महेन्द्रनारायण निधिको शालीक काठमाडौंमा
नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष एवं गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिको काठमाडौंमा शालीक निर्माण गरिएको छ। काठमाडौंको बसुन्धरास्थित महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताल परिसरमा स्वर्गीय निधिको शालीक निर्माण गरिएको हो। आयोमेल संवाददाता
नेपालमा मास्क अनिवार्य गर्न किन नसकेकाे?
खोक्दा वा हाच्छ्यूँ गर्दा यस्तो छिटा करिब २ मिटर (६ फिट) भन्दा टाढासम्म पनि पुग्नसक्छ। कोरोना जाेखिम भएका स्थानमा जाँदा सामान्य र स्वस्थ व्यक्तिले साधारण तथा घरमै बनाइएको लुगाको मास्क पनि लगाउन सक्ने तर, ६० वर्षभन्दा माथि उमेर भएकाले अनिवार्य मेडिकल मास्क लगाउनुपर्ने डब्लुएचओको नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ। दीपक दाहाल
र, आज कल्पना भट्ट एउटी ‘औसत’ नारीमात्रै होइनन्, उनी कोही नभएकाहरूका लागि ‘सबथोक’ हुन्। मरेपछि ‘दागबत्ती’ दिने पनि उनै हुन्। त्यसपछि काजकिरिया गर्ने उनै। त्यसैले त ‘सेतो’ रंगसँग अथाह प्यार छ उनलाई। ‘रंगीन’ सपनाहरू त बस् सबै मिथ्या र फगत लाग्छ। यज्ञराज जाेशी
वास्तवमा प्रेम मानिसको हृदयमा पहिले नै निहित हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो विभिन्न स्वरुपमा प्रस्तुत हुने र देखिने विषय हो। म पहिले जनावरप्रेमी थिइनँ। जब मेरो छिमेकीले मेरो घरको कुकुरलाई विष खुवाएर मारिदियो तब मलाई एक किसिमको रियलाइजेसन भयो। शिरिश मान महर्जन
सूचनाकर्मको तागतबाट आयोमेल आगमनको औचित्य स्थापित हुनेछ। र, यसका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसमा हाम्रो निष्पक्ष र सन्तुलित व्यवहार पाठक-दर्शकको मन जित्ने मूल आधार रहने छ। प्रकाशकीय